क्रसर उद्योग बन्द हुँदा पुनर्निर्माणमा कठिनाई, विकास निर्माणका योजनाहरु ठप्प | Trishuli Khabar - Trishuli News Network
क्रसर उद्योग बन्द हुँदा पुनर्निर्माणमा कठिनाई, विकास निर्माणका योजनाहरु ठप्प
विदुर । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द भएको कारण भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण र विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएको छ ।
सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई आ–आफ्ना घर निर्माणको समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकेकोमा घर निर्माणमा जुटिरहेको बेलामा अदालतको आदेश भन्दै जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु बन्द भएपछि समस्यामा परेका छन् । खानीका बालुवा पहिले नै बन्द गरिएको कारण समस्या भोग्दै आएका भूकम्प पीडितहरुले क्रसर उद्योगबाट पनि बालुवा खरीद गर्न नपाउँदा समस्या भएको बताएका छन् ।
विदुरमा घर बनाउँदै गरेका कल्याणपुरका गीता न्यौपानेले ढुंगा गिटीकै कारण घर बनाउने कामबीचैमा रोकिएको बताइन् । ‘बालुवा गिटी कहि पाइदैन । क्रसरमा गयो । बन्द छ । खानीहरु पनि बन्द छ । कसरी घर बनाउने हो तनाब छ’ उनले भनिन् ।
‘नागरिकलाई तोकिएको समयमा घर बना पनि भन्ने निर्माण सामग्री किन्न पनि नपाईने अनि कसरी निर्माण सम्पन्न हुन्छ ?’ तारकेश्वर–४ का ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले भने । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गराउन भूकम्प पीडितहरुले सिमेन्टेड घरहरु बनाउन थालेका छन् । ढुंगामाटोको घर बनाउनेहरु स्वाट्टै घटेको छ । सबैले घर बनाउन थालेकोले गिटी बालुवाको माग धेरै भएको छ । ‘तर, यही बेला कानून र आदेशको नाममा बन्द गर्नु भनेको भूकम्प पीडितलाई घर नबनाए हुन्छ भनेको हो’ भूकम्प प्रतिरोध घर बनाउँदै गरेका श्रेष्ठले बताए ।
जिल्लाका क्रसर उद्योग बन्द हुँदा जिल्लामा सञ्चालन भईरहेको विकास निर्माणका योजनाहरु पनि ठप्प भएको छ । जिल्लामा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेका छन् । सरकारले हामीलाई निर्माण सामग्री किन्न पनि नपाई अबस्था सिर्जना गर्ने हो भने जिल्लामा विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाउन नसकिने नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए । ‘कसैले उजुरी देला रे, अनि सबै ठप्प बनाइदिने ? व्यवहारिक पक्ष हेर्नु पर्दैन ? हामीले विकास निर्माणका कामहरु कहाँबाट सामग्री ल्याएर बनाउने ?’ उनले भने ‘खानी पहिले नै बन्द गरेका थिए । बालुवा पाइदैन । क्रसरबाट ल्याउन अहिले त्यो पनि बन्द । अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्ने ?’
काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गरोस् तर, काम गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीले सहज रुपमा निर्माण सामग्री खरिद गर्नु पर्ने वातावरण स्थानीय प्रशासनले बनाउनु पर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
अदालतको आदेशको कारण जिल्लामा निर्माणका कामहरु ठप्प भएकोले यसलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने योजना बनाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङ बताए । ‘अदालतले दिएको आदेशको मर्म के हो कानून व्यवसायी राखेर छलफल गर्दैछौं । दर्ता नभएका बाहेक अरु पनि बन्द गर्ने योजना हाम्रो होइन, यो आदेशको मर्म के हो व्याख्या गनुृ पर्छ’ उनले भने ‘विकास निर्माण कामहरु पनि रोक्ने अबस्था आउनु हुन्न ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा अबैध रुपमा सञ्चालन भएका फिरफिरे र क्रसर उद्योग बन्द गर्ने भन्दै केही साता पहिले पत्राचार गरेको थियो । दर्ता नभएकालाई बन्द र दर्ता भएका र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन नभएकाहरुलाई व्यवस्थित गराउन पत्राचार गरिएको थियो । तर, अदालतले सबैलाई एउटै वास्केटमा हालेर आदेश दिदा दर्ता भएकाहरु पनि मारमा परेको क्रसर व्यवसायी विनोदराज श्रेष्ठले बताए । ‘राज्यको तत्कालिन ऐन नियममा दर्ता भएको उद्योगलाई अहिले आएर बन्द गराउन पाइदैन’ उनले भने ‘दर्ता भएकाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन नियमन गर्ने नाममा अहिले बन्द गराउने कार्य भएको छ ।’
नुवाकोट क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जिल्लामा अबैधको नाममा बैध उद्योगहरु पनि बन्द गराइन नहुने बताए । ‘क्रसर उद्योग बन्द हुनु भनेको जिल्लाको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प हुनु हो । वैशाख जेठमा विकासका कामहरु धेरै हुने गरेकोमा अहिले त्यो रोकिएको छ’ उनले भने ।
यहाँका क्रसर उद्योगले आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितको मागअनुसार निर्माण सामग्री पु¥याउन नसकिरहेको समयमा क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि पुनःनिर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द भएपछि भूकम्पपीडितलाई आवास पुनःनिर्माण गर्न, निर्माण सामग्री खरिद गर्न र जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गल्छी–मैलुङ–रसुवागढी, पुष्पलाल–मध्येपहाडी सडक मार्गलगायत आयोजनाको काम रोकिएको छ ।
सडक, भवन, जलविद्युत गृह निर्माणका कामहरु भईरहेको बेलामा निर्माणसामग्री उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग बन्दले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने पक्का भएको छ ।